पैसाबाट सर्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? – Khabaarpati
October 16, 2020 October 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on पैसाबाट सर्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा त्यसले सञ्चालन गरेको एटिएमसम्म जानुपर्ने हुन्छ। एटिएममा गएर हामी पैसा त निकाल्छौं तर त्यो कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। पैसाका माध्यमबाट कोरोना भाइरसलगायत विभिन्न सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।अध्ययनले के भन्छ त? अमेरिकाको न्यूयोर्क युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनअनुसार पैसामा पनि ‘सूक्ष्म जीव’ बाँच्न र हुर्कन उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाणित भइसकेको छ।